FIKAMBANANA KB8M : Vita ny famindram-pahefana sy ny famindram-pitantanana teo amin’ireo filoha
Ny talata teo no natao ny famindram-pahefana eo amin’ny filohan’ny KB8M teo aloha ramatoa Gina sy ny filoha vaovao, Miza Annie. 14 juillet 2017
Tao amin’ny sampan-draharaham-paritra misahana ny mponina no nanaovana ny famindram-pahefana. Ny sata mifehy ny fikambanana no natolotra ho mariky ny famindram-pitantanana.
Fikambanam-behivavy miisa 200 mahery no mivondrona ao amin’ny KB8M. Manana ny maha izy azy zy io eo amin’ny tanànan’i Mahajanga ary vovonana ifampiresahan’ny sehatra maro mikarakara ny vehivavy ity KB8M.
Ny tanjon’ny filoha vaovao dia ny hanohy ny asa tsara efa vitan’ny teo aloha, izay tena nahavita tokoa. Hijery akaiky ihany koa ny olana misy eo amin’ny fikambanana tsirairay ahafahana mamaha ny olana.